शाहाकारी भोजनका दिव्य १३ फाईदाहरु !विश्व चर्चित शाहाकारीहरुको यस्तो छ सुझाव(भिडियो सहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २८ चैत्र २०७६, शुक्रबार April 10, 2020
असनेपालन्युज, सिड्नी ।शाकाहार जीवनको बारेमा विश्वका चर्चितहरु के भन्छन्:
शाकाहारी मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मांसाहारीको भन्दा बढी हुन्छ ।
अधिकांश शाकाहार भोजनलाई हाम्रो पाचनतन्त्रले छिटै पचाउँछ । विभिन्न धर्मले यस्तो भोजनलाई सात्विक मानेका छन् । सात्विक भोजन शान्ति, एकाग्रता, करुणा, प्रेम, दयाजस्ता गुणका लागि प्रख्यात छ ।
स्वस्थ्य जीवनको लागि शाकाहारि भोजन सर्बोत्तम हो । हाम्रो धर्म-संस्कृतिले पनि मांशहार भोजनलाई कटौती गरेको छ ।
विशेषगरी रोगी पशुपंक्षीको मासुबाट रोगका कीटाणुहरू, एन्टिबायोटिक तथा हर्मोन अवशेष बढी भएको मासु, फर्मालिन हालेको माछाबाट ती रसायनहरू, फोहोर तथा बासी मासुबाट रोग लगाउने हानिकारक जीवाणुहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छन् ।
जीवाणुको प्रवेशले झाडापखाला लाग्ने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्नेजस्ता सामान्यदेखि ज्यानै जान सक्ने खतरनाक लक्षणहरू देखिन्छन् । तर शाकाहारिहरुलाई भने यो जोखिम न्युन हुने गर्छ ।
शाकाहारिहरु जनावरबाट सर्ने रोगबाट शिकार हुन बच्नेछन्। अएन्टिबायोटिक बढी भएको मासुको उपभोगले शरीरमा औषधिको प्रभावकारिता घटाई सामान्य संक्रमणका कारण पनि जटिल समस्या भोग्नुपर्ने वा ज्यानै जान सक्ने पनि हुन्छ । धुवाँमा पोलिएको मासु सेकुवाको रूपमा खाँदा त्यसमा भएको बेन्जो ए पाइरिनजस्ता रसायनले क्यान्सर निम्त्याउन सक्दछन् ।
बोटुलिनमनामक ब्याक्टेरियाले संक्रमण गरेको माछा, मासुमा हुने विषका कारण स्नायु प्रणालीमा असर परी ज्यान जान सक्दछ । युरिक एसिड भएकाहरूका लागि रातो मासु धेरै खतरनाक हुन्छ ।
शाकाहार भोजनले आत्मविश्वास दिन्छ । यो भोजनमा बोसो अर्थात् कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम हुन्छ । रेसा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ ।
स्वस्थ्य जीवनको लागि शाकार भोजन सर्बोत्तम हो । हाम्रो धर्म-संस्कृतिले पनि मांशहार भोजनलाई कटौती गरेको छ ।
वनस्पतिजन्य खाद्यवस्तुबाट हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्व प्राप्त गर्ने सम्भावना हुंदाहुंदै जनावर मारेर भोग गर्नु एकातिर पाशविक व्यवहार हो भने अर्कातिर निर्दयी एवं अनैतिक चरित्रको पराकाष्टा हो ।
वैदिक सनातन दर्शन अन्तर्गतको वनस्पतिजन्य प्रोटिनतिर वैज्ञानिकहरूको झुकाव भएको प्रस्ट छ । अब धर्तिमा सुखी भएर बांच्न शाकाहार बन्न उनिहरुले सुझाव दिएका छन्। यसले पर्यावरण जोगाउंने छ ।
शाकाहार बन्दा प्रकृतिलाई संरक्षण हुन पुग्छ । मांसाहारी समाजले अवोध निरीह पशुलाई हाम्रो भोग्यवस्तु नसम्झेर उनीहरूको पनि यस घर्तीमा सह–अस्तित्व र अधिकार स्वीकार गर्दै सुसंस्कृत एवं नैतिक समाजको सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
विश्वका प्रसिद्ध शाकाहारीव्यक्तिहरू
विश्वका केही प्रसिद्ध व्यक्तिहरू शाकाहारी थिए । गणितिज्ञ पाइथागोरस (ई.पू. ५७०–४९५) शाकाहारी थिए र उनले शाकाहारीको अभियान नै चलाएका थिए । उन्नाइसौँ शताब्दीसम्म शाकाहारी भोजनलाई ‘पाइथागोरियन भोजन’ भनिन्थ्यो । दार्शनिक प्लेटो (ई.पू.४२८–३४८) पाइथागोरसका अनुयायी थिए । लियानाडो डा भिन्सी, जर्ज बनार्ड शाह, लियो टोल्स् टोय, महात्मा गान्धी जस्ता व्यक्तिहरू शाकाहारी थिए । सन् १९१० मा मुटुको दोस्रो शल्यक्रिया पश्चात् तत्कालीन राष्ट्रपति विल क्लिन्टन भेगान भएका थिए । एक वर्ष पछि उनले भेगान खानाले फाइदा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए । सन् २०११ मा मिचेल ओबामाले संयुक्तराज्य कृषि विभाग (यु. एस. डि. ए.) को ‘माई प्लेट’ (मेरो थाल) अनावरण गर्दा ‘मासु र सिमी’ लाई ‘प्रोटिन’ ले प्रतिस्थापन गरिएबाट वनस्पतिजन्य प्रोटिनतिर वैज्ञानिकहरूको झुकाव भएको प्रस्ट हुन्छ । शाकाहार जीवनको बारेमा विश्वका चर्चितहरु के भन्छन् त यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला :
शाकाहारको विषयमा तयार बनेको यो अर्को तथ्य पनि:…..….
Benefit of vegetarian and vegan
If you are veg you’ll live longer.